တိုနီတောရက်စ် | 10/06/2021 10:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 10/06/2021 11:01 | နေအိမ်
ခရမ်းချဉ်သီးအစွန်းအထင်းများကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ခရမ်းချဉ်သီးအစွန်းအထင်းများကိုဖယ်ရှားရန်လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် လုံးဝ။ သို့သော်သင်ယခုအချိန်တွင်အစွန်းအထင်းကိုသတိမပြုမိဘဲနာရီပေါင်းများစွာလွန်သွားလျှင်ပင်အချို့သောလှည့်ကွက်များဖြင့်၎င်းတို့ကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။
သဘာဝခရမ်းချဉ်သီးသည်ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်နှင့်မတူသောကြောင့်၎င်းသည်အစွန်းအထင်းဖြစ်ပေါ်စေသောမည်သည့်ခရမ်းချဉ်သီးအမျိုးအစားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ ketchup ကဲ့သို့ခရမ်းချဉ်သီးအခြေခံသည့်ဝက်အူချောင်းများတွင်ခရမ်းချဉ်သီးများပါဝင်သည့်အပြင်ရေ၊ အမွှေးနံ့သာများနှင့်အရက်များပါ ၀ င်သည်။ ဒီတော့လိုက်နာရမယ့်အဆင့်တွေကတစ်ခုချင်းစီအတွက်ကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါသင်တွေ့လိမ့်မည် ခရမ်းချဉ်သီးအစွန်းအထင်းများကိုဖယ်ရှားရန်အကြံပြုချက်များ.
သဘာဝခရမ်းချဉ်သီးသည်အညစ်အကြေးကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသောအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများ (သို့) ထည့်သွင်းမှုများမပါဝင်သောကြောင့်ဖယ်ရှားရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ သို့သော်သင်ကခရမ်းချဉ်သီးအစွန်းအထင်းတစ်ခုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားနေပါက၎င်းသည်ခြောက်သွေ့သောအစွန်းအထင်းတစ်ခုထက်မတူခြားနားပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးအမှု၌ အောက်ပါအဆင့်များကိုသင်လိုက်နာရမည်:
လျှောက်ထားပါ ဆပ်ပြာအနည်းငယ် ပန်းကန်ဆေးစက်နှင့်လက်ချောင်းများဖြင့်ပွတ်ပေးပါ။
ရှေ့ဆက်ပါ အဝတ်လျှော်ပါ ပုံမှန်ပါပဲ။
တစ် ဦး စိုစေ အဖြူရှလကာရည်နှင့်အတူဝါဂွမ်းအထည် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း။
ဂရုတစိုက် ကဖယ်ရှားပစ်သည်အထိခရမ်းချဉ်သီးအစွန်းအထင်းအပေါ်လျှောက်ထားပါ လုံးဝ။
ထုပ်ပိုးထားသောခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်များတွင်ပါဝင်မှုတစ်ခုထက်မကပါ ၀ င်သောကြောင့်မလိုချင်သောသူများအားဖယ်ထုတ်ရန်ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။ အဝတ်အစားအစွန်းအထင်း။ သင်မြန်လေလေခရမ်းချဉ်သီးအစွန်းအထင်းကိုသင်လုံးဝဖယ်ရှားနိုင်လေဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အဝတ်အစားပေါ်မှာခရမ်းချဉ်သီးအစွန်းအထင်းကိုသင်တွေ့ရင် အဝတ်လျှော်ရန်စောင့်နေသည့်ရေချိုးခန်းအိတ်ထဲတွင်မထားပါနှင့်။ ဒီအဆင့်တွေကိုလိုက်နာပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးအစွန်းကိုအဝတ်အစားတွေထဲကနေဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
တစ် ဦး လက်ခံရရှိသူ၌တည်၏ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါများကိုရေအနည်းငယ်နှင့်ရောမွှေပါ။ သင်အစွန်းအထင်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်သင်သီးသောငါးပိတစ်ခုရသင့်သည်။
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါငါးပိပြန့်နှံ့ အစွန်းအထင်းနှင့် 15 မိနစ်ခန့်ထားခဲ့ပါ။
အချိန်ကုန်လွန် အရောအနှောကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ နှင့်ရေအေးနှင့်အတူသုတ်ခြင်း။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပုံမှန်အဖြစ်အဝတ်ကိုလျှော် အဝတ်လျှော်စက်ထဲမှာ။
မြန်မြန်ဆန်ဆန်အရေးယူခြင်းသည်အရေးကြီးသော်လည်း၊ သင်သည်ဆုံးဖြတ်ချက်မချခြင်းနှင့်အခြေအနေကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးစေခြင်းများကိုကြုံတွေ့ရသည်။ ငါတို့ခရမ်းချဉ်သီးအစွန်းအထင်းများရသည့်ပထမ ဦး ဆုံးဗီဇတစ်ခုမှာအကြွင်းအကျန်များကိုဖယ်ထုတ်ရန်လက်သုတ်ပုဝါကိုသုံးခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မှားသည်မှာသေချာသည်။ အဆိုပါလက်သုတ်ပုဝါထပ်မံအစွန်းအထင်းနှင့်ပြန့်နှံ့ ကထည်၏အမျှင်များကကောင်းစွာ impregnated ခံရဖို့ကကူညီပေးသည်.
ဤအမှုများတွင်အစွန်းအထင်းများပြန့်ပွားမှုအန္တရာယ်မရှိဘဲအစားအစာအကြွင်းအကျန်များကိုဖယ်ထုတ်ရန်ဇွန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဓားတစ်ချောင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။ သင်၏ခရမ်းချဉ်သီးစွန်းသောအဝတ်ကိုလျှော်သောအခါသင်ခြောက်သွေ့ခြင်းကိုမသုံးသင့်ပါအပူသည်အစွန်းအထင်း၏အမျှင်များအပေါ်ကောင်းစွာပြုပြင်ရန်အစွန်းအထင်းကိုကူညီပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အ ၀ တ်လျှော်လျှော်ဖွပ်နေစဉ်တွင်အညစ်အကြေးနှင့်အပူရှိန်ကိုဖယ်ရှားရန်အပူကိုကာကွယ်ရန်အရိပ်ထဲတွင်ခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့မင်းရဲ့အဝတ်အစားပေါ်မှာခရမ်းချဉ်သီးအစွန်းအထင်းရှိတယ်၊ ဒီလှည့်ကွက်တစ်ခုမှသင့်အတွက်အသုံးဝင်မယ်ဆိုရင်စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ အခြားရွေးချယ်စရာများမကြိုးစားမီအချို့သောအစွန်းအထင်းများဖယ်ရှားသည့်ထုတ်ကုန်ပင်စျေးကွက်ထဲတွင်ယခင်ဖြေရှင်းချက်ကိုဖယ်ရှားရန်စောင့်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာအဝတ်ကိုလျှော်။ အခြောက်လှန်းပါ။ သင့်အဝတ်အစားကိုမထိခိုက်စေဘဲအခြားလှည့်ကွက်တစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » နေအိမ် » ခရမ်းချဉ်သီးအစွန်းအထင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်